बलात्कृत भएकी हुँ भन्दा मेराे कुरा कसैले सुनेन्
> बलात्कृत भएकी हुँ भन्दा मेराे कुरा कसैले सुनेन्
१७ पुष २०७६, बिहीबार ०८:२०
काठमाडौ,१७ पुस । बिहान कलेजमा एक पिरियड पढाइ छोडेर हतारहतार कोठामा आउने अनि खाना बनाएर खाने त्यसपछि न्युरोडस्थित एक सहकारीमा काम गर्न बिहान १० बजे पुग्ने दीपिका (नाम परिवर्तित) को दैनिकी हो । यसरी बिहान कलेज, दिउँसो सहकारीको काममा दीपिका व्यस्त हुन थालेको १ वर्ष भयो । बाजुराकी १९ वर्षीया दीपिका बानेश्वरस्थित एक कजेलमा कक्षा १२ अध्ययनरत छिन् । यति पढ्दा तपाईं हामीलाई लाग्न सक्छ : यो कुन समाचार कथा भयो र ? यो त एउटा आम नेपाली चेलीको दैनिकी भन्दा खासै फरक त छैन !
हाम्रो परम्परागत समाजमा एउटी केटीका लागि सबैभन्दा पवित्र कुरा उसको अस्मिता मानिन्छ । आफ्नो अस्मिता नै लुटिएपछि दीपिका चरम निराशामा डुबिन् । त्यो क्षण उनका मनमा घरमा जाऊँ कि भीरमा गएर हामफालुँ भन्ने दाधारे भावनाको आँधी चल्यो । उनको एक मनमा यो घटनाबारे घरपरिवार र समाजले थाहा पायो भने राम्रो नजरले हेर्दैन, बाँचेर पनि पलपल मर्नुभन्दा त बरु आत्महत्या गर्नु नै बेस हुन्छ भन्ने भावनाले उनलाई छोप्यो । तर उनमा आत्महत्या गरिहाल्ने आँट भने आइहालेन । खासमा, आत्महत्याको विचारले किच्दै गर्दा उनले आफ्नी आमालाई सम्झिन् ।
घरमा बाबाले मादकपदार्थ सेवन गरेर दैनिक जसो रडाको मच्चाउनुका साथै हातपात गर्दा छुटाउने अनि आमासँगै भाइबहिनीलाई बोकेर घरबाट एकछिनका लागि भाग्न सहयोग गर्ने अल्लि ठूली छोरी उनी मात्रै थिइन् । ‘अँध्यारो भयो, बाबाले कतै सधैँ झैँ आमा भाइबहिनीलाई पिटे, हातपात गरे पो होलान्, तिनीहरुलाई जोगाउने त कोही पनि छैनन्’ भन्ने कुराले उनलाई सतायो र आफ्नी आमा अनि भाइबहिनीको मायाले उनलाई आत्महत्या गर्न दिएन । उनी घर फर्किन् ।’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा जाँदा बाबा आमा थिएनन् । विस्तारै गएर विस्तरामा पल्टिएँ । तर आफूमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाबारे आमालाई भन्ने आँट गर्न सकिनन् ।’
आमा र गाउँलेहरूले उनलाई कसको पाप बोकेकी होस् भनेर सोध्न थाले । उनले मलाई थाहा छैन भनिन् । म बलात्कृत भएकी हुँ भन्दा कसैले पत्याएनन् । घरमा बाबा आमाको झगडा झनै बढ्न थाल्यो, थाहा पाएकाले आफन्त गाउँकाले गर्ने व्यवहारमा परिर्वतन आयो । अनेक खालका व्यवहारले आजित दीपिका घरबाट भागेर त्यही जङ्गलमा मर्नकै लागि भाग्दा मामाहरुले फेरि घरमै फर्काए । त्यस पछि उनलाई धेरै पटक गर्भ भएको बच्चाको बाबु को हो भनेर सोधियो । उनलाई काहाली लाग्दो घटना दोर्‍याएर भन्न बाध्य पारियो । मामाहरुको सहयोगमा उनलाई काठमाडौँ ल्याएर जाँच गर्दा आठ महिनाको गर्भ भएको निक्र्योल भयो । त्यस पछि उनी एक गैरसरकारी संस्थामा आश्रित भइन् ।
यौन हिंसा गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन आश्यक भए पनि गाउँलेले इज्जतका नाममा कानुनलाई कुल्चिदिन्छन् । गल्ती र गल्ती गर्नेलाई जोगाउन खोज्नेलाई जेल नभएर फाँसी दिन आवश्यक भएको उनले तर्क गरिन् । यौनहिंसा तथा जबरजस्ती करणी गर्नेलाई फाँसी दिने कानुन निर्माण गरे कानुनलाई मिचेर कसैले यौनहिंसा गर्न आँट गर्न नसक्ने उनले बताइन् ।